Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada oo dadweynaha badankiis shaki ka qabaan. – Bosaso Times News
Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada oo dadweynaha badankiis shaki ka qabaan.
admin October 10, 2017 Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada oo dadweynaha badankiis shaki ka qabaan.2017-10-10T17:58:26+00:00 Puntland, somali News No Comment
Waxaa goobaha lagu sheekaysto ama shaaha lagu cabo ee magaalada Boosaaso ama guud ahaan dalka Soomaaliya ka socda doodo dadweynuhu isku hayaan kuna saabsan shirka madaxda dawlad goboleedyadu ku leeyihiin magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland.
Dadka badankiis ayaa moodaa inay u arkaan shirkan inuu horseed u yahay burbur iyo ka hor imaad madaxdani ku sameeyaan dawladda Federaalka ee Maxamed C/laahi Farmaajo, halka dadka qaar aan sidaa u badnayna ay u arkaan in shirkani uusan wax dhiba u keenayn dawladda Federaalka uuna horseedi karo is fahan iyo isu soo dhowaansho dhexmara dawladda dhexe iyo maamul goboleed yada.
Waxaa markaad la sheekaysato dadka siyaasadda falan qeeya dhexdhexaadna ka ah arimaha Soomaaliya ay kuu sheegayaan in maamul goboleedyada ay soo foodsaartay kalsooni xumo dhexdooda ah maadaama dadka Soomaaliyeed taageero weyn u hayaan dawladda dhexe, ayna madaxda maamul goboleedyadu ka cabsi qabaan in mid mid xilka looga qaado iyaga oo u aaneynaya in arinkaa ay lug ku leedahay dawladda federaalka ee Xamar. Taas ayaana keenaysa inay nimankaan tashadaan si ay markaa isu difaacaan oo dawladda dhexe nafteeda u tusaan inay midaysan yihiin ayna arimahooda faraha kala baxdo.
Hase ahaatee dooda daweynaha ee suuqa shaahyada iyo fadhi ku diririka ka socota waxaa dooda ku badan oo ku xoogan qolyaha u arka maamul goboleedyada shirkooda mid lagaga soo horjeedo dawladda dhexe taas oo inta badan dad weynuhu ka barteen xiligii qabqab layaasha dagaal oo sidaan oo kale shiri jiray si ay markaa uga horyimaadaan dawladda markaa jirtay ayna u hor istaagaan.
Waxaase xiligaan hubaal ah in dawladda dhexe ay ka duwan tahay kuwii hore ayna muuqato inay tahay dawladda taageero balaaran ka haysata dadka Soomaaliyeed maamul goboleedyaduna aysan ku dhicin inay ka horyimaadaan
Waxaan sugnaa waa hadba waxay ay soo saaraan maamul goboleedyadu iyo waxa ay ku dhawaaqaan.
http://www.bosasotimes.com/shirka-madaxda-maamul-goboleedyada-oo-dadweynaha-badankiis-shaki-ka-qabaan/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/shirkakismaayo2.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/shirkakismaayo2-150x150.jpg 2017-10-10T17:58:26+00:00 adminPuntlandsomali NewsKismaayo,maamul goboleedyada,Shirka KismaayoWaxaa goobaha lagu sheekaysto ama shaaha lagu cabo ee magaalada Boosaaso ama guud ahaan dalka Soomaaliya ka socda doodo dadweynuhu isku hayaan kuna saabsan shirka madaxda dawlad goboleedyadu ku leeyihiin magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Dadka badankiis ayaa moodaa inay u arkaan shirkan inuu horseed u yahay burbur iyo ka...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Kismaayo, maamul goboleedyada, Shirka Kismaayo
« Qaybta-5.. Macmiil Dulmane Xaqaagii xagee jiraa?
Akhriso war murtiyeedka ka soo baxay shirkii Kismaayo »